टी–१० लिग सुरु हुने मिति सार्वजनिक, नेपाली खेलाडीले खेल्ने सम्भावना ! » Onlycricnepal
टी–१० लिग सुरु हुने मिति सार्वजनिक, नेपाली खेलाडीले खेल्ने सम्भावना !
२२ बैशाख २०७८, बुधबार २०:२५
काठमाडौंः यूएईमा आयोजना हुने अबुधाबी टी–१० लिगको आगामी संस्करणको मिति सार्वजनिक गरिएको छ। बधबार छोटो फर्म्याटको अबुधाबी टी–१० लिगको पाँचौँ सिजनको मिति सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्वजनिक मितिअनुसमार पाँचौँ सिजनको टी–१० लिग १८ नोभेम्बरदेखि ४ डेसेम्बरसम्म संचालन हुने भएको छ।
टी–१० लिगमा ८ वटा टिम सहभागी रहेका छन्।जसमा टिम आबुधाबी, मराठा अरेबियन्स, बंगला टाइगर्स, डेक्कन ग्लाडियटर्स, क्वलन्दर्स, दिल्ली बुल्स, नर्दन वारियर्स र पुणे डेविल्स छन्।
गत सिजनको टी–१० लिगको उपाधि नर्दन वारियर्सले जितेको थियो। फाइनलमा दिल्ली बुल्सलाई ८ विकेटले हराउँदै वारियर्सले उपाधि आफ्नो पक्षमा पारेको थियो।
गत संस्करणको लिगमा तीन नेपाली क्रिकेटरहरु सोमपाल कामी, करण केसी र कुशल मल्लले खेलेका थिए। सोमपालले मराठा अरेबियन्स, करणले पुने डेभिल्स र कुशलले टिम आबुधाबीबाट लिग खेलेका थिए। नेलाी अलराउन्डर पारस खड्कालाई टीम अबुधाबीले इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरको भूमिकामा नियुक्त गरेको थियो।
यस पटक पनि नेपाली खेलाडीहरुले लिगमा खेल्ने सम्भावना रहेको छ। सोमपाल, करण, कुशलसँग कुशल भुर्तेलले पनि यस पटक मौका पाउने सम्भावना रहेको छ।
हालै सम्पन्न त्रिदेशीय टी–२० सिरिजमा चारै खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। जसकारण पनि उनीहरुले टी–१० लिग खेल्ने सम्भावना छ। यसका साथै उनीहरुले आगामी खेलहरुमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेमा खेल्ने सम्भावना अझै बलियो हुनेछ।
गत सिजनमा यस्तो थियो तीन नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन
सोमपालले प्रतियोगिता ८ ओभर बलिङ गर्दा ११६ रन खर्चिएर ३ विकेट हात पारे । उनले १० बल डट राख्दै ९ छक्का र ११ चौका खाए ।
नर्दन वारियर्स विरुद्धको उद्घाटन खेलमै पहिलो ओभर बलिङ गर्न पाएका सोमपालले यो खेलमा दुई ओभर बलिङ गर्दा २८ रन खर्चिए।
पहिलो ओभरमा ४ डट राख्दै १ छक्का सहित मात्र आठ रन खर्चिएका उनले खेलको १० औं तथा आफ्नो दोस्रो ओभरमा १ छक्का र २ चौका सहित २० रन खर्चिए । यो खेलमा मराठा अरेवियन्स ५ विकटेले विजयी भएको थियो ।
दिल्ली बुल्स विरुद्धको दोस्रो खेलमा मात्र १ ओभर बलिङ गर्न पाएका सोमपालले १ डट राख्दै ४ चौका सहित १७ रन खर्चिए । यो खेलमा दिल्ली ९ विकेटले विजयी भएको थियो ।
बङ्ग्ला टाइगर्स विरुद्धको खेलमा १ ओभर बलिङ गरेका सोमापालले १ डट राख्दै समान १–१ चौका र छक्का सहित १३ रन खर्चिए । यो खेलमा बङ्ग्लाले ६ विकेटको जित हात पारेको थियो ।
कलन्दर्स विरुद्धको खेलमा सोमपाललाई टि–१० मा पहिलो सफलता मिल्यो । खेलको चौथो ओभर बलिङ गरेका उनले अन्तिम बलमा सोहेल अख्तरलाई एलबिडब्ल्युको सिकार बनाए ।
यो खेलमा १ ओभर बलिङ गरेका सोमपालले ३ छक्का सहित १९ रन खर्चिए । यो खेलमा मराठा ४ विकेटले पराजित भएको थियो ।
टिम अबुधाबी विरुद्धको खेल सोमपालका लागि सबैभन्दा खराब थियो । मात्र १ ओभर बलिङ गरेका उनले २७ रन खर्चिए ।
तेस्रो ओभरमा बलिङ गरेका उनलाई क्रिस गेलले ३ छक्का र २ चौका प्रहार गरेका थिए । यो खेल अबुधाबीले ९ विकेटले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
मराठाको अन्तिम खेलमा डेक्कन ग्याडियटर्सविरुद्ध सोमपालले टि–१० लिगकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । यो खेलमा उनले २ ओभर बलिङ गर्दै मात्र १२ रन खर्चिएर २ विकेट हात पारे ।
छैटौं ओभरमा आफ्नो पहिलो ओभर बलिङ गरेका उनले २ डट राख्दै २ रन खर्चिएर २ विकेट हात पारे । उनले ओभरको चौथो बलमा प्रशान्त गुप्तालाई मोक्सदेख होसनीबाट तथा अन्तिम बलमा यासिर कलिमलाई आलिसान सारुफुबाट क्याच गराए ।
आठौं ओभरमा आफ्नो दोस्रो ओभर बलिङ गरेका उनले २ डट राख्दै २ चौका सहित १० रन खर्चिए । सोमपालको उत्कृष्ट प्रदर्शनका बाबजुत यो खेल मराठाले २९ रनले गुमाएको थियो ।
करणले पुणेका ६ खेलमध्ये ५ खेलमा बलिङ गर्ने अवसर पाए । उनले ५ ओभर बलिङ गर्दा ३ डट राख्दै ८० रन खिर्चएर १ विकेट हात पारे । जसमा ४ छक्का र १० चौका सामेल छ ।
डेक्कन ग्याडियटर्स विरुद्धको पहिलो खेलमा १ ओभर बलिङ गरेका करणले समान १–१ चौका र छक्का सहित १७ रन खर्चिए । यो खेल पुणेले ७ विकेटले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
कलन्दर्स विरुद्धको खेलमा १ ओभर बलिङ गरेका करणले १ चौका सहित ९ रन खर्चिए । यो खेल कलन्दर्सले ९ विकेटले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
टिम अबुधाबीविरुद्ध करणलाई टि–१० को पहिलो तथा एक मात्र सफलता मिलेको थियो । खेलको चौथो आभेरमा बलिङ गर्न आएका करणले पहिलो बलमै क्रिस गेललाई बोल्ड गरे ।
यो खेलमा १ ओभर मात्र बलिङ गर्न पाएका उनले ४ चौका सहित १८ रन खर्चिए । यो खेल अबुधाबीले ५ विकेटले जित्यो।
बङ्ग्ला टाइगर्स विरुद्धको खेलमा पनि १ ओभर बलिङ गरेका करणले २ डट राख्दै २ छक्का र १ चौका सहित १७ रन खर्चिए । यो खेल पुणेले ८ विकेटले गुमाएको थियो ।
दिल्ली विरुद्धको खेलमा बलिङ गर्न नपाए पनि ब्याटिङमा आएका करण पहिलो बलमै आउट हुने पुगे । उनलाई ४.५ ओभरमा अली खानले रहमनउल्लाह गुर्वाजबाट क्याच गराए । यो खेल दिल्लीले ८ विकेटले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो।
पुणेको अन्तिम खेलमा नर्दन वारियर्सविरुद्ध १ ओभर बलिङ गरेका करणले १ डट राख्दै ३ चौका र १ छक्का सहित १९ रन खर्चिए । यो खेल पुणेले ८ विकेटले गुमाएको थियो ।
कुशलले अबुधाबीका लागि कलन्दर्सविरुद्ध १ मात्र खेल खेल्ने अवसर प्राप्त गरे । जसमा १२ बलको सामना गरेका उनले १८ रन बनाए ।
६.४ ओभरमा मोहम्मद जाहिदबाट बोल्ड भएका उनले समान १–१ चौका र छक्का प्रहार गरे । यो खेलमा २१ रनको जित हात पार्दै टिम अबुधाबीले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।
टि-१० लिगमा पारसको टिम आज बङ्गला टाईगर्स विरुद्ध खेल्दै : पर्लान त पारस प्लेईङ ११ मा
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०१:२८
आबुधाबीले टस जित्यो, प्लेइङ–११ मा छन् यी खेलाडी
२१ माघ २०७७, बुधबार २०:०३
करणको टिम पुणेमाथि दिल्लीको शानदार जित
२० माघ २०७७, मंगलवार २१:३७